ARCHIVE, BLOG » नेपाली पूँजी बजारमा युवतीहरुको बढ्दो आकर्षण, 'नचिल्ने मौरीले मह दिँदैन हजुर'
केहि दिन पहिलाको कुरो हो ,घडीमा विहानको ११ वज्न लागि सकेको थियो । म गाडी पार्किड: गरेर व्रोकर अफिसतर्फ लम्कदै थिएँ । एक जना युवती जसको उमेर मेरो सानो छोराकोजति हुँदो हो । उहाँ नानीले मलाइ सोध्नुभयो, 'अंकल यो स्टक मार्केटमा काम गर्न कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ ? मैले भनें 'नानी , पूँजी बजारमा काम गर्न त्यस्तो यतिनै उमेर पुग्नुपर्छ भन्ने त हुदैन, तरपनि आफैले आफ्नो नामबाट सेयर खरिद विक्री गर्न नागरिकताको प्रमाण-पत्र चाहिने हुँदा १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।
हो , सेयर वजारमा लगानी गर्न कुनै उमेरको हदवन्दी हुदैन । जस्तो की तपाई विधार्थी हुनु हुन्छ , तपाईसंग वुवा , आमाले पकेट खर्च गर्न दिएको पैसा छ , सानो तिनो जव गरेर कमाएको पैसा छ, दशै तिहारमा प्राप्त भएको पैसा छ वा भनौ वर्थ डे लगायतवाट आयको पैसा वचत गर्नु भएको छ भने त्यसै रकमवाट पनि यो मार्केटमा लगानी सुरु गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईले एक्कासी आमा वुवा संग म स्टक मार्केटमा लगानी गर्छु भनेर पैसा माग्नु भयो भने उहाहरुले भन्नु हुनेछ की नानी , तिमि कहाँ लगानी गर्न गैरहेकी छौ ! त्यो त जुवा घर हो । यस्तो जवाफ पाउनपनि सक्नु हुन्छ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने यो जुवा घर हुदै होईन । जुवा भनेको त एक किसिमको अवैधानिक खेल हो , यस्मा तपाईले थापेको पैसा अर्कोले मार्यो भने पुराका पुर पैसा सोहोर्छ र मार्रा भनेर कराउने गर्छ । स्टक मार्केट सरकार द्वारा नियन्त्रित वैधानिक रुपमा लगानी गर्ने स्थान हो । सुजवुझको साथ कम्पनी छनोट गरी लगानी गरियो भने संसारमै स्टक मार्केटमा लगानी गरेर पैसा कमाए जस्तो अर्को कुनैपनि पैसा कमाउने पेशा जन्मिएको छैन ।
तपाई यो मार्केटमा नयाँ भएर आऊदै हुनुहुन्छ भने Trading गर्छु भनेर प्रवेश नगर्नुस । Trading को सोचमा आऊदै हुनुहुन्छ भने पैसा डुव्न पनि सक्छ । वुवाआमासँग पैसा लिएर Treading गर्ने सोच वनाउनु भएको हो भने त झन यो विल्कुलै गलत हुने छ । तपाई Investment गर्ने सोच वनाएर आउनुस तपाईले धोका खानुहुने छैन । तपाइले क्रमश: काम पनि सिक्दै जानु हुनेछ । जस्तो उदाहरणको लागी कसैले भरखर भरखर गाडि चलाउन सिक्दै छ भने उसले एकै चोटी सयको Speed मा गाडि चलाउदैन विस्तारै विस्तारै विस , तिसको Speed मा चलाउदै सिक्ने गर्छ । तपाइ पनि आफुलाई सोही अवस्थामा तुलना गरि लगानी गर्न आउनुहोस तपाइ सफल हुनुहुनेछ ।
तपाइ सुरुआती अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाइले किनेको स्टकको मूल्य घटदैमा डराउनु पर्ने हुन्न । जव तपाइ त्यो लगानीलाई कम्तीमा पनि पाँच वर्ष भुल्न सक्ने क्षमता राख्नु हुन्छ भने , तपाइले लगानी गरेको कम्पनीले जे जति कमाएको हुन्छ , वार्षिक रुपमा तपाइलाई पनि त्यो कंम्पनीले नाफा भाग लगाउने गर्छ । स्टक मार्केटमा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने तपाइले किनेको स्टकको मूल्य १/२ वर्ष पनि सुतेकै अवस्थामा रहन पनि सक्छ । तर , जव स्टकको निन्द्रा खुल्छ यानिकी त्यस कम्पनीको performance राम्रो हुन थाल्छ तव त्यो दुई वर्ष निदाएर वसेको कुम्भकर्ण यसरी उठछ की तपाईले आँकलन नै गर्न सक्नुहुन्न ।
२ वर्ष नवढेको स्टकको मूल्य १० दिनमै नेटो काटने गरि वढन पनि सक्छ । जव तपाईलाई स्टकले मुनाफा दिन थाल्छ छप्पर फारेर दिन्छ । स्टक मार्केटको Business मा कसैले चाहदैमा राता रात करोड पति हुने होइन वरु लालचमा परियो भने रोडपति हुन वेर लाग्दैन । त्यसैले भनिन्छ जव हामि मौरीको मह काटछौ त्यस वेला केही मौरीले चिल्ने पनि गर्छन । "नचिल्ने मौरीले मह दिदैन" भने झै स्टक मार्केटमा पनि काम गर्न सुरु गरेपछी कही कतै घाटा हुन्छ । अनि नाफा पनि मनग्गे हुन्छ । यस्को लागी सुझवुझ र धैर्यका साथ लगानी गर्नु पर्छ । त्यसैले त मौरीले चिल्छ अनि मिठो मह दिने गर्छ ।